အမိုက်စားဂိမ်းတွေကို 4K HDR 60fps နဲ့ ဆော့ကစားနိုင်မဲ့ Google ရဲ့ Stadia ကို နိုဝင်ဘာမှာ စတင်မည် - PX
အမေရိကန်အခြေစိုက်အင်တာနက် ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Google အနေနဲ့ Android နဲ့ ကမ္ဘာ စမတ်ဖုန်းလောကကို ကြီးစိုးခဲ့ပြီး နောက်ထပ်ခြေလှမ်းသစ်တစ်ရပ်အနေနဲ့ Gaming လောကကို ခြေလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Google အနေနဲ့ Stadia လို့ခေါ်တဲ့ Cloud-based Gaming Service ကို ပြီးခဲ့တဲ့ March လ က စတင်ပြသခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို စတင်ကြေညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Cloud-based Gaming ဆိုတာကတော့ Gaming Laptop/PC/Smartphone မရှိပေးမဲ့ ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ Laptop/PC/Smartphone ရှိယုံနဲ့ Spec Requirements မြင့်မားတဲ့ အမိုက်စားဂိမ်းတွေကို 4K HDR 60fps နဲ့ ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဓိကလိုအပ်တဲ့ Graphic ၊ RAM တွေကိုတော့ ကုမ္ပဏီဘက်က Date Center တွေတည်ဆောင်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်မှ တစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Cloud-based Gaming Service ကို ဦးဆုံးရရှိမဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ ဘယ်ဂျီယံ၊ ဖင်လန်၊ ကနေဒါ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ အိုင်ယာလန်၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေ၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်၊ ဗြိတိန် နဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံတို့မှာ စတင်ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Google အနေနဲ့ Stadia ကို အင်တာနက် မြန်နှုန်းမြင့်မားတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံ အများစုမှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Esports ပိုင်း တိုးတက်တဲ့ တောင်ကိုရီးယား၊ ရုရှား နဲ့ တရုတ်လို နိုင်ငံတွေ အနေနဲ့လည်း မကြာခင်မှာ Stadia ကို ရရှိဖို့ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း တရုတ် နဲ့ ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် တရုတ် ကို Google အနေနဲ့ ခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ လက်ရှိ Esports ဈေးကွက်တွေမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ်ဈေးကွက်ကိုတော့ Google အနေနဲ့ ဝင်ဖို့တော့ များနေပါတယ်။
Stadia မှာတော့ ရွေးချယ်စရာ Service ၂ မျိုးရှိမှာဖြစ်ပြီး Stadia Free Version နဲ့ $ 9.99 (မြန်ာမာငွေ ၁ သောင်းခွဲ) ဝန်းကျင်ခန့်ကျသင့်မည် Stadia Pro Version ဖြစ်ပါတယ်။ Free Version အနေနဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ စတင်ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ သင်အနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ Stadia ကို စတင်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Stadia Founder Edition ကို $129 ပေးပြီး ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Stadia Founder Edition ကိုတော့ Google Store မှာ စတင် Pre-order ပြုလုပ်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာငွေ ၂ သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဒီ Stadia Founder Edition မှာတော့ Limited-edition Night Blue Stadia Controller ၊ A Chromecast Ultra နဲ့ သုံးလ အခမဲ့ Stadia Pro Subscription အကောင့် ၂ ခု ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အတော်ကို တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် Game တွေအဖြစ် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ Destiny 2: The Collection လည်း အခမဲ့ ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၃ လ အခမဲ့ Stadia Pro Buddy Pass တစ်ခုကိုတော့ အခြား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိကို မျှဝေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Base နဲ့ Pro ကြားမှာ ဘာတွေကွာခြားမှာလဲ ? Bass Free အနေနဲ့ 1080p Stereo Sound နဲ့ပဲ ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေ ၁ သောင်းခွဲလောက်သုံးလိုက်တာ နဲ့ 4K 60fps HDR ကို 5.1 surround sound နဲ့ Special Gaming Experience အပြည့်နဲ့ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်နှုန်းမြင့် 35Mbps လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ 35Mbps လိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Maxed-out setting အပြည့်နဲ့ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တစ်လ ၂ သောင်းခွဲ ၃ သောင်းတန် 5Mbps တို့နဲ့ ဆိုရင်တော့ အနိမ့်ဆုံး Resolution နဲ့သာ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မက်တွေက ဈေးကြီးပါတယ်နော်။
တစ်ခုရှိတာက Stadia Pro ကို မြန်မာငွေ ၁ သောင်းခွဲ ပေးလိုက်ယုံ နဲ့တော့ ဂိမ်းတွေ အကုန်ဆော့လို့ရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ပိုက်ဆံပေးထပ်ဝယ်ဆော့ရမည် ဂိမ်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဂိမ်းတစ်ခုချင်းစီ အတွက်တော့ ဘယ်လောက် ထပ်ပြီး ကုန်ကျမလည်းတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Stadia ကနေ ဘယ်လို ဂိမ်းတွေ မျှော်လင့်လို့ရမလဲ ?
အမျိုးအစားပေါင်းစုံပါဝင်မှာပါ Sport ၊ FPP ၊ Simulation ၊ RPG ၊ Adventure မျိုးစုံပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိနာမည်ကြီး ဂိမ်းတွေဖြစ်တဲ့ PUBG (PC) ၊ Dota2တို့လိုဂိမ်းတွေလည်း နောက်ပိုင်းရရှိနိုင်ဖွယ်လည်းရှိနေပါတယ်။
စတင်မိတ်ဆက်မဲ့ နိုဝင်ဘာလ က စတင်ပြီး ဂိမ်းပေါင်း ၃၁ မျိုးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီး အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Stadia ကို ဘယ်လို အသုံးပြုလို့ရလည်းဆိုရင် Chrome Browser ၊ TVs ( Chromecast Ultra နဲ့ Stadia Controller ) ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပြီး စမတ်ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ Pixel3၊ Pixel3XL ၊ Pixel 3a နဲ့ Pixel 3a XL တို့မှာ အရင် အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Stadia controller တစ်ခုကိုတော့ $69 ( မြန်မာငွေ ၁ သိန်းဝန်းကျင် ) နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်စရာ အရောင်တွေအနေနဲ့ Black ၊ Clearly White နဲ့ Wasabi တို့ရှိပါမယ်။
May လ အတွင်းထွက်ရှိသမျှထဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ OnePlus7Pro